ကမ္ဘာကျော်တဲ့ လူငယ်စာမျက်နှာ	Written by အယ်ဒီတာ	Thursday, 07 February 2013 20:19	The Do Write Campaign နှင့် မက်ဒလင်း လစ်ပီ အင်တာနက် စာမျက်နှာ တစ်ခုဖြစ်ပြီး အသက် ၁၆ နှစ် အရွယ် ရှိနေပြီ ဖြစ်တဲ့ မက်ဒလင်း လစ်ပီက တည်ထောင် ထားတာပါ။ buy cialis jelly online. buy cialis cheap. argaiv1378
အနှစ်သက်ဆုံးဖက်ရှင်တွေနဲ့ တွေ့ခဲ့ရတဲ့ ဉာဏ်လင်းအောင်	Written by khing wutt yee	Tuesday, 15 January 2013 20:19	မြူခိုး မဝေ ပေမဲ့ အချမ်းမပေါ့တဲ့ ဇန်န၀ါရီလမှာ ဖူးငုံ တို့လည်း အနွေးထည် လှလှ၊ ဂျာကင် လှလှတွေနဲ့ ရှိုးထုတ်နိုင် ကောင်းပါရဲ့နော်။ ဇန်န၀ါရီလ အတွက် မျက်နှာဖုံးရှင်က ဒီရာသီနဲ့ အရမ်းကို လိုက်ဖက်တဲ့ သူကို ရွေးချယ် ထားတယ်။
ကမ္ဘာကျော်တဲ့ ဆယ်ကျော်သက် လှုပ်ရှားမှု	Written by အယ်ဒီတာ	Tuesday, 15 January 2013 18:40	မာလာလာယူဖ် စာဇိုင်း(ပါကစ်္စတန်) မာလာလာကို ၁၉၉၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် ၁၂ ရက်မှာ မွေးဖွားခဲ့ ပါတယ်။ သူက ပါကစ္စတန် နိုင်ငံက ကျေးလက် လေးမှာ မွေးဖွား ခဲ့ပြီး သူ နေတဲ့ နေရာမှာ တာလီဘန် တွေ ရှိနေ ပါတယ်။
ကမ္ဘာကျော်တဲ့ ကဗျာဆရာတင်မိုး	Written by Teen အယ်ဒီတာအဖွဲ့	Wednesday, 12 December 2012 18:09	ဆရာ ဦးတင်မိုးကို ဆရာဂျမ်း လို့လည်း နာမည်ရင်းနဲ့ လူသိများ ပါတယ်။ အထူး သဖြင့်တော့ အင်မတန် မေတ္တာစိတ်ကြီးတဲ့ ကဗျာဆရာဖြစ်ပြီး နိုင်ငံ့ အရေးကို ကြောင့်ကြ စိုက်တတ် သလို ကဗျာတွေ ကိုလည်း ကလေးလူကြီး မရွေး စွဲငြိတသသွားအောင် စပ်ဆို ရေးဖွဲ့နိုင်သူ အဖြစ် လူသိပါတယ်။
ကမ္ဘာကျော်တဲ့ အာရှတီထွင်မှုများ	Written by Teen အယ်ဒီတာအဖွဲ့	Tuesday, 04 September 2012 15:06	ကမ္ဘာ့သမိုင်း တစ်လျှောက်ပေါ်ထွန်းခဲ့တဲ့ နေ့စဉ်သုံး ပစ္စည်းတွေထဲမှာ တချို့ကတော့ အာရှမှာ ပထမဆုံး စတင်တီထွင် ဖန်တီး ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ ပစ္စည်းလေးတွေကို အမှတ်တရ ဖြစ်အောင် ဖော်ပြ ပေးလိုက်ပါတယ်။
ကမ္ဘာကျော်တဲ့ ကလေးအလုပ်သမား ဆန့်ကျင်ရေး
<< Start < Prev 123 Next > End >>	Page 1 of 3	Choose Your Issue
We have 84 guests online	and views	© 2008-2010 Shweamyutay.com. All rights reserved.